Nezvedu - Shenzhen Lithtech Energy Co, Ltd.
Shenzhen Lithtech Energy Co, Ltd.Iye yepamusoro-tech bhizinesi, inoshanda muR & D uye kushambadzira kweLithium rechargeable bhatiri zvigadzirwa. Nehunyanzvi hwekugadzira uye manejimendi manejimendi, Lithtech yakagadzira yekutanga kirasi timu yeinjiniya, vagadziri, R&D vagadziri, zvigadzirwa zvemaneja, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro uye kutengesa / vatengi. Izvo zvakanyatso kuita kutsvagisa & kusimudzira, kugadzira uye kutengesa pane yepamusoro lithiamu mabhatiri,
Isu tinopawo izere masevhisi eakagadzirwa bhatiri zvigadzirwa, zvinosanganisira bhatiri dhizaini, budiriro, maseru ekusarudza uye BMS, Chaja, Isu tinoshandira yakazara yakazara bhatiri mhinduro uye imwechete-mira zvitoro zvevatengi Ndosaka vanhu vazhinji uye vazhinji vachiziva Lithtech Energy kumba nekunze.
Yedu Lithium bhatiri zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muUPS backup, Telecom shongwe, Solar simba rekuchengetedza system, mota dzemagetsi, AGV, Gorofu-ngoro, Mugwagwa-kuchenesa, magetsi-mudhudhudhu, mwenje wezuva mwenje 、 nemagetsi maturusi etc.
Sezvo isu tese tichizivikanwa, Lithium bhatiri ndiyo inonyanya kushandiswa bhatiri sero mune yemagetsi indasitiri. kurema uremu, zvakatipoteredza, hurefu kutenderera hupenyu, saka Chingave chiri chakanaka chinotsiva lead-acid bhatiri, Lithtech inopa izvo zvaunoda.
Seimwe yemakambani anokurumidza kukura eakajairwa bhatiri gungano / bhatiri pack Mutengesi muChina. Lithtech mudiki, ane simba uye ane hunyanzvi, isu ticharamba tichigadzira zvigadzirwa zvine hunyanzvi mazano uye budiriro matekinoroji mune ramangwana, Tinotenda isu tinogona kuunzira nyika hupenyu hwakanakisa nekusimudzira Lithium bhatiri matekinoroji mune ese mashandiro ehupenyu hwedu.
Hupenyu Hutsva Nyowani Simba Kugamuchirwa kuLithtech!
Tine yemazuva ano yakajairika fekitori uye tinoshandisa vanopfuura zana vashandi
Nunura zvigadzirwa zvitsva mumusika nekumhanyisa mhanyisa; Simbisa kuvimbika kwehunhu hwechigadzirwa.
Kana zvichidikanwa, isu tinokwanisa kupa zvitupa zvemagetsi asi iro gwaro rekutanga rinofanirwa kuchengetwa mukambani.
isu tine akasimba nyanzvi vagadziri uye mahunyanzvi ekupa technical technical.
Kukurudzira module bhatiri pack
Kuzadzisa MW level ESS
Kugadzira 5G telecom station chiteshi backup system
Yakapihwa seNatinal Hight-tech Enterprise
Yakagamuchirwa neNational "Peacock Plan" Talent coopertion chirongwa
Anopfuura makumi maviri.000 mauniti e lithiamu bhatiri masisitimu akapihwa muHESS uye yakaderera mota mota
Partner muPack fekitori, nyanzvi pakiti timu yakaumbwa
Yakavakwa zvine hungwaru kubatana pamwe neNanning Environmental Vehicle Kambani, Dalian Rongke Simba, SIASUN
Lithtech yakavambwa, yakanangana nekupa lithiamu bhatiri mhinduro